‘धेरै माया दिँदा रै’छन्’ : यसरी पायो गीतले ‘किलर सङ’ को परिचय
पुस २८, २०७४| प्रकाशित १४:२१
'धेरै माया दिँदा रै'छन्' गीतलाई धेरैजनाले मेरो आफ्नै कहानी ठान्छन्। तर, यो गीत लेखिनुको कारण धेरैले सोचेको भन्दा बिलकुल फरक छ। यो गीत लेखिनुको कारणबारे आजसम्म जति जनालाई सत्य कुरा भन्दै आएको छु, नपत्याउनेको संख्या धेरै छ। प्रेम-वियोगको भाव बोकेको गीत भन्नेबित्तिकै गीतकारले आफ्नै प्रेमजीवनको कुरा लेख्यो भनेर चर्चा गर्न सजिलो पनि छ। तर, गीतकार आफ्नो संसारमा मात्र सीमित हुँदैन। यो गीत जन्मिँदाको समयतिर मलाई माया-प्रेम भन्ने थाहै थिएन, त्यसमा परेको भए पो थाहा होस्!
१४-१५ वर्षको उमेरदेखि नै मैले गीत र कविताको ढाँचा जानेर लेख्न थालेकी हुँ। पछि गीत लेखनबारे राम्ररी बुझेर लेख्ने क्रममा एक दिन एउटा घटनाले निकै छोयो। करिब १५ वर्षअघिको कुरा। विभिन्न टेलिसिरियलमा अभिनय गर्ने पाइलट विजय गिरीको 'विमानचालक' भन्ने सिरियलमा म त्यो समय निकै मोहित भएको थिएँ। नेपाल टेलिभिजनमा प्रसारण हुने त्यो सिरियलको विशेष गरी 'विमानचालक छ तिम्रो आकाश विमान उडाउनको लागि' बोलको गीत एकदमै मन पर्थ्यो। त्यही गीतकै लागि भए पनि म सिरियल हेर्थेँ।
विधिको विधान, स्काइलाइन्स एयसरलाइन्सको विमान उडाउने क्रममै दुर्घटनामा विजय गिरीको मृत्यु भएको खबर आयो। त्यो दिन बेलुका मन निकै पिरोलियो। परिवारलाई कति आघात पर्‍यो होला भन्ने लाग्यो। आफू गीतकार पनि भएकाले मैले कल्पना गरेँ, 'उहाँ मेरो श्रीमान् र म उहाँकी श्रीमती भएको भए उहाँको मृत्यु हुँदा मभित्र कस्तो भाव आउँथ्यो होला, उहाँको यादमा कसरी लेख्थेँ होला!' रेडियोमा उहाँको मृत्युको समाचार बजिरहेको थियो। राति आठ बजे गीत लेख्न बसेकी मैले आधा घन्टामा पूरा गरेँ। लेख्नेबित्तिकै दिदीलाई सुनाएँ, सधैं रचना सुनाएर दिक्क पारिरहने भएकाले दिदीले सामान्य हिसाबले नै 'राम्रो लेखिस्' भन्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो।
२०५९ सालमा संगीतकार अर्जुन नेपालीसँग भेट भएपछि उहाँको एकल संगीत र मेरो एकल रचनामा सँगै एलबम गर्ने कुरा भयो। डायरीबाट गीतहरू छान्ने क्रममा उहाँले 'धेरै माया दिँदा रै'छन्' पनि छान्नुभयो। गीत कम्पोज भएपछि निकै राम्रो बन्यो। यो गीत सुरुमा रामकृष्ण ढकाललाई गाउन लगाउने कुरा थियो। तर, त्यतिबेला अमेरिकामा रहनुभएको उहाँ एक महिनामा फर्किने कुरा भए पनि बसाइ लम्बिएपछि हामीले कुर्न सकेनौं। पछि स्वरूपराज आर्चायलाई गाउन लगाइयो।
'वियोग' नाम राखेर एलबमको लागि ६० सालमा प्राइम स्टुडियोमा गीतहरू रेकर्ड भए। रेकर्डिङ हुने दिनहरूमा म समयमै स्टुडियो पुग्थेँ, तर विभिन्न कारणले रेकर्डिङको समय केही घन्टा पछाडि सर्दा कुरिरहनुपर्थ्यो। स्टुडियोका कर्मचारीहरूले मप्रति माया देखाउँदै 'यो बहिनी यहाँ आएर कुरिराखेको हुन्छ, को होला है' भनेर आपसमा कुरा गर्थे। ती दिन कहिल्यै बिर्सिन्नँ।
देशमा संकटकाल लागेकाले केही कुराको लागि पनि अनुकूल समय थिएन। सँगै बजार प्रवर्द्धन गर्ने कुरा भए पनि पछि संगीतकारले आफ्नो पैसा लिएर छुट्टिनुभयो। पहिलो एल्बम भएकाले केही कुराको मेसो नभए पनि जसोतसो एक्लै दौडिएँ। एक वर्षम्म एलबमले बजारमा खासै प्रभाव नपार्दा निराश भएँ म। पछि बिस्तारै निकै हिट भयो। अडियो क्यासेट जम्मा एक लाख र सिडी ६ हजार प्रति बिक्री भयो। सिआरबीटी त्यतिबेला भर्खर प्रचलनमा आए पनि केही पछि मात्रै राखियो। एक लाख ८५ हजार पटकभन्दा बढी डाउनलोड भएछ यो गीत।
एल्बम निकाल्न जम्मा एक लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो। हामी पाँच दिदी-बहिनी भए पनि घरमा छोरीप्रति भेदभाव थिएन। एक जनालाई केही गरिदिँदा सबैलाई उस्तै हुनुपर्ने भएकाले बुवालाई अप्ठेरो नपरोस् भनेर मैले मेरो बिहे गर्ने पैसा एल्बममा लगाउँछु भनेँ। बुबाले इच्छा छ भने गर् भनेर स्वीकृति दिनुभयो।
यो गीतको अँध्यारो पाटो पनि छ। गीत सुनेर नेपालमा एक जना र दार्जिलिङमा दुई जनाले आत्महत्या गरेको कुरा सुनियो। गीतकारको रूपमा स्वार्थवश भन्ने हो यो अँध्यारो पाटो मेरो लागि उज्यालो हो, आफ्नो गीतको शक्ति र सफलता देखिन्छ। तर, मानवीय हिसाबले निकै दुःख लाग्यो। उतिबेला कतिपय नजिकका मान्छेले यसैलाई स्क्यान्डल बनाएर एल्बम अझ हिट बनाउन सुझाव पनि दिएका थिए।
तर, कसैको जीवनको मूल्य र मृत्युलाई आफ्नो फाइदाको लागि उपयोग गर्न मन मानेन।
धेरै माया दिँदा रै'छन् मुटु जोडेर जानेहरू
यादमा डुबी बाँच्दा रै'छन् मुटु जोडेर बस्नेहरू
लाग्ने होइन थकाइ नै पिरतीलाई कुर्नेहरू
पर्खाइमै मर्दा रै'छन् साँचो माया गर्नेहरू।
छाडिगयौ किन तिमी दुनियाँमा एक्लै मलाई
आँखाहरू रोइदिन्छ मनले सम्झेर तिमीलाई
थाहा थियो तिमीबिना बाँच्ने आधार छैन अरु
तिम्रो वियोगमा जलिरहेँ यत्तिकैमा मर्छु बरु।
दैव पनि भो बैगुनी पारिदियो हाम्रो बिछोड
सँगै पनि जान दिएन केवल दियो मुटुमा चोट
पलपल सम्झनामा आउँछौ तिमी म के गरूँ
साँझमा दियो बाली कुर्छु निभेर जाँदा सँगै मरूँ।
शान्ति र पर्यटनका लागि ‘द भ्याली अफ लाइट' म्युजिक भिडियो सार्वजनिक
रसुवामा बेवारिसे शव फेला